ပြည်သူ့ဘုန်းဘုန်း: January 2009
ကျနော်ကို အမေးချင်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုမေးပါဆိုရင် တော်လှန်ရေးကြီးဘာကြောင့် မအောင်မြင်ရသေးတာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊၊ ဒီမေးခွန်းကို ကျနော်တွေ့တဲ့သူတိုင်းကို မေးခဲ့သလို ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း အမေးခံခဲ့ရဘူးတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူများလည်း ကျနော်နည်းတူ အမေးခံခဲ့ရဘူးမယ်ထင်ပါ တယ်။ ဒီမေးခွန်းကို ကျနော့်ကိုယ် ကျနော်လည်း ပြန်မေးဖူးပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ အဖြေအမျိုးမျိုးထွက်ပါလိမ့်မယ်။ ကြိုက်သလိုဖြေနိုင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အဖြေမှန်ဖို့လိုပါတယ်။ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ဟာအဖြေမရမချင်းတန်ဖိုးမထွက်ပါဘူး ပုစ္ဆာတိုင်းလဲမတူကြပါဘူး။ အမေးရှိရင်အဖြေရှိရမယ်ဆိုပေမဲ့ အဲဒီအဖြေဟာမှန်ကန်တိကျဖို့လိုပါတယ်။ တချို့ပုစ္ဆာတိုင်းဟာပါးစပ်ကဖြေလိုက်ရုံပြီးပေမဲ့ တချို့ပုစ္ဆာဟာတကယ်လက်တွေ့ချတွက်၊ တစ်ခုချင်းဖြေရှင်းချုက် ထုတ်သွားပြီး တကယ်လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ဖြေပြမှအမှန်ရမယ့်ပုစ္ဆာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုစ္ဆာဟာအခုမှပေါ်တဲ့ပုစ္ဆာ မဟုတ်ပါဘူး ဟိုးရှေ့ခေတ်အဆက်ဆက်ကပေါ်ခဲ့တဲ့ပုစ္ဆာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုစ္ဆာကိုခေတ်အဆက်ဆက်ကဖြေခဲ့ကြပါတယ် ဖြေနိုင်တဲ့သူများရှိသလိုမဖြေနိုင်တဲ့သူများလဲရှိခဲကြပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ဟိုးရှေ့ခေတ်ကျနော်တို့လှမ်းမမြင်နိုင်တဲ့ခေတ်ကိုကျတော်မပြောလိုတော့ပါဘူး ကျတော်တို့လှမ်းမြင်နိုင်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ကိုတိုင်ဒီမေးခွန်းကိုလက်တွေ့ဖြေလက်တွေ့အောင်မြင်ခဲ့ တယ်ဆိုတာကို ပြန်ကြည့်ပြီးဖြေရမယ်။ သချာင်္ပုစ္ဆာများမှာလည်းထိုနည်း၎င်းပဲ ရှေ့လူများတွုက်ပေးခဲ့တဲ့နည်းစနစ် များပေါ်မှာမှီပြီးချဲ့ထွင်ထွက်ကြရတယ်။ ဒါမှအဖြေမှန်ရနိုင်ပါတယ် ဒီလိုမဟုတ်ပဲငါသိငါတက်လုပ်ကာ ဘယ်အဖြေမှနည်းမှီစရာမလိုဘူးငါအဖြေနဲ့င်ါသွားမယ်ဆိုရင် အဖြေမှန်မရဘဲဝေးသည်ထက်ဝေးနေကြအုံးမှာဖြစ် ပါတယ်။
ဒီပုစ္ဆာဟာအခက်ခဲဆုံးပုစ္ဆာဖြစ်သလို တဦးတစ်ယောက်ထဲနဲ့လဲဖြေလို့ရတဲ့ပုစ္ဆာမဟုတ်ပါဘူး တစ်ဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ သုံးလေးဖွဲ့နဲ့လည်းဖြေလို့ရတဲ့ပုစ္ဆာမဟုတ်ပါဘူး ဒါကိုနားမလည်ပဲငါဖြေနေတာပဲ ငါ့အဖွဲ့ဖြေနေတာပဲဆိုပြီး ဆက်သွားနေရင်ဒီအဖြေဟာအမှန်နဲ့ဝေးနေအုံးမှာဖြစ့်ပါတယ် ဒီအဖြေဟာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့လက်ထက်မှာ အဖြေမှန်ရခဲ့ပြီးပြီ။သူတို့ဘာကြောင့်အဖြေမှန်ရခဲ့တာလဲ…?ကျနော်တို့ဘာကြောင့်အဖြေမှန်မရကြသေးတာလဲ……? ဒါကိုသေချာစဉ်းစားအဖြေထုတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဆင်ခြေကန်တဲ့အဖြေမျိုးကိုကျနော်မကြားလိုပါ။ တချို့ကဒီအစိုးရ ဟာအင်္ဂလိပ်၊ ဂျန်ပန် တိုင်းတပါးအာဏာရှင်ထက်ဆ်ိုးတယ် ဒါကြောင့်မို့ ဒို့မအောင်မြင်တာဆိုပြီးဆင်ချေပေး ကြတယ်။
ဟုတ်ကဲ့တိုင်းတပါးသားအင်္ဂလိပ်၊ ဂျန်ပန်ထက်ဆိုးတယ်ဆိုရင်အဲဒီကာလထက်ပိုပြီးအားမထုတ်သင့်ဘူး လား….? အဲဒီကာလကတော်လုန်ရေးသမားများထက်ပိုပြီးအားထုပ်တာကိုမပြောနဲ့ သူတို့အားထုတ်ကြတာနဲ့ နိူင်းယုဉ်ရင်အပုံတစ်ရာပုံတစ်ပုံတောင်ရှိမယ်မထင်သေးပါ။သူတို့လက်ထက်သမိုင်းများကိုပြန်လေ့လာကြည့်ကြပါ သူတို့ခေတ်ကလူတိုင်းလိုလို ဒီမေးခွန်းကိုမေးကြသလို လူတိုင်းလိုလိုဒီမေးခွန်းကိုဖြေနေကြပါတယ်။ အခုကျန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘယ်နှစ်ယောက်မေး၍ဘယ်နှစ်ယောက်ဖြေနေကြပါသနည်း..? ဒီမေးခွန်းကို တကယ်မေးပြီး တကယ်ဖြေခဲ့ကြ ထောင်ဒဏ်တွေ (၁၀၄)နှစ်၊ (၆၈)နှစ်၊ (၃၅)နှစ် စသည်ဖြင့် အနှိပ်စက် အညှင်းဆဲ ခံပြီး ဖြေနေကြချိန်မှာ အခုထက်ထိ မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာ ဒီပု စ္ဆာကို ကိုယ်နှင့်မဆိုင်သလို မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် နေကြတာဟာ အလွန်ဝမ်းနည်းစရာ စက်စုပ်ရွံရှာစရာ ကောင်းလှပါတယ်။ သူများတွေတိုင်းပြည်အတွက် ဒီမေးခွန်းကို တကယ်မေးပြီး တကယ်ဖြေနေတဲ့ အချိန်မှာ - ယနေ့ မြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်း တွေ့ရင် ဘာတွေမေးနေကြတာလဲ..? “ဟေ့ကောင် ဘာဂဏန်းရလဲ..? ထိတ်စီးကဘာလဲ..? ဘောလုံးပွဲ ဘယ်လိုပြီးသွားလဲ..? ဟိုနေ့က အာဝါဒေးပွဲမှာ ဘယ်လောက် ရလိုက်လဲ..?“ ဆိုတဲ့ အင်မတန်အောက်တန်းကျတဲ့ မေးခွန်းတွေကို မေး အဲဒီမေးခွန်းတွေကို အဟုတ်ကြီးမှတ်ပြီး မြိ်န်ရည် ရှက်ရည်နဲ့ အရှက်မဲ့စွာမေးကြ ဖြေကြ လုပ်နေကြတာဟာ အင်မတန် အော့နှလုံးနာစရာကောင်းလှပါတယ်။ တကယ်ကိုးကွယ်နေကြတာက ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်း အမြင့်ဆုံး ဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဓကို ဒါပေမယ့် လုပ်နေကြတဲ့ လုပ်ရပ်တွေက ကမ္ဘာမှာအောက်တန်းအကျဆုံး အဆင့်အနိမ့် ဆုံးဆိုတဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ။ ဒီနိုင်ငံ ကမ္ဘာ့ အဆင့်အနိမ့်ဆုံး အဆင်းရဲဆုံး အချာဆုံး နိုင်ငံထဲမပါလို့ ဘယ်နိုင်ငံပါရအုံးမှာလဲ။ မိမိကိုယ်ကို မညာတမ်း မလိမ်တမ်း ပြန်မေးကြပါ။ မိမိတို့ လုပ်ရပ်ဟာ မိမိတို့ကိုးကွယ်တဲ့ အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့ ဗုဒ္ဓခွင့်ပြုတဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟုတ်ရဲ့လား ဆိုတာကို သေသေချာချာ ပြန်မေးကြပါ။ အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့ဗုဒ္ဓကဘယ် တော့မှခွင့်မပြုပါဘူး။ ဒါကိုပိဋကက်ကျမ်းစာတွေမှာ အထင်အရှားဟောတာတွေအများကြီးရှိပါတာယ်။
န.အ.ဖ စစ်အာဏာရှင်လူယုတ်မာဗိုလ်ကြီးများက သူတို့ယုတ်မာချင်တိုင်းယုတ်မာလို့ရအောင်အားလုံး စစ်ကျွှန်ဘ၀ရောက် ဒုက္ခတွေရောက်နေကျတာကိုမေ့အောင်အချင်းချင်းလောင်းကစားတွေလုပ်တော့မတဲ့ကြ - ကွဲကြ ပြဲကြတဲ့အချိုန် သူတို့ရဲ့လက်ကိုင်ဒုတ်ရဲတွေ စုံထောက်တွေအတွက် ပိုပြီးဂုတ်သွေးစုပ်နိုင်အောင် လှည့်ကွက်ဖန်ပြီးတရားဝင် ခွင့်ပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ အဆင့်အတန်း မြင့်တဲ့ မိမိ ကိုးကွယ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘုရားက ခွင့်မပြုဘဲ ပိတ်ပင်ထားတဲ့ စကားတော့နားမထောင်ပဲ ကမ္ဘာမှာအဆင့်အတန်းမရှိ၊ လူစာရင်းမဝင်တဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေက တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာကို လုပ်နေကြရင် မိမိတို့ရဲ့အဆင့်အတန်းဟာ ကြာလေနိမ့်လေမို့ ဒီထက်နိမ့်ရင် အောက်မှာ အဝိစိ ငရဲပဲ ရှိပါတော့တယ်။ ကျနော် တော်တော်များများကို ပြောဘူးပါတယ်။ ဒို့နိုင်ငံက ပြည်သူတွေ သူတို့အခုလုပ်နေကြတဲ့ နှစ်လုံး သုံးလုံး ချဲတို့ ဘောတို့ လောင်းကစားလုပ်သလောက်ပဲ နိုင်ငံတော်လှန်ရေးမှာ ပါဝင်ပြီးတော့လုပ်လို့ ယနေ့တော်လှန်ရေးကြီးအောင်မြင်ပြီလို့ ဒီပုစ္ဆာအဖြေရပြီလို့ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တကယ်မေးရမှာက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တွေ့ရင် မေးရမှာက “တော်လှန်ရေးကြီး ဘာကြောင့်မအောင်မြင်သေးတာလဲ?” “တော်လှန်ရေးကြီး အောင်မြင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ” “တော်လှန်ရေးကြီးအောင်မြင်ရေးမှာ ငါအခုပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပြီလား” ငါအခုဘာလုပ်နေသလဲ။ နအဖ စစ်အာဏာရှင်တွေ လှည့်စားထားတဲ့ လောင်းကစားနဲ့ဘဲ အချိန်ကုန်နေလား? နအဖ တွေလှည့်စားထားတဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေနေရင် တော်လှန်ရေးထဲ မပါဝင်နိုင်ဘူး ဆင်းရဲမွဲတေပြီး အလုပ်ထဲပဲလုပ်ပြီး နိုင်ငံရေးဟာငါနဲ့ မဆိုင် ဆိုပြီးနေကြစေဆိုတဲ့ လှည့်ကွက်ထဲမှာပဲ ဆက်လျှောက်နေဆဲလား? နအဖ စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ပေါင်းရင် ချမ်းသာတယ် ရာထူးရတယ် အာဏာရတယ် ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရောဆိုပြီး လူ့အန္ဓ လူ့ဗာလ တကိုယ်ကောင်းဆန် လူယုတ်မာအုပ်စုတွေထဲမှာ မျောပြီး ဆက်လျှောက်နေကြသလား? ငါတို့တော့ ထောင်ကျပြီးပြီ တိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ မလုပ်ရသေးသူတွေ သူတို့ဆက်လုပ်ကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီး မလုပ်တော့ဘဲ ထိုင်စားနေကြတဲ့ အုပ်စုထဲ ယောင်ချာချာနဲ့ ဆက်မျောနေကြမှာလား? ဒါတွေဟာ တကယ်မေးကြ ရမဲ့ ဖြေကြရမယ့် မေးခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ် ဂျပန်တွေလက်ထက်မှာလဲ လူအနည်းစုသာဖြေခဲ့ကြချိန်မှာ မအောင်မြင်သေးပါဘူး။ တဖြေးဖြေးအရှိန်မြှင့်ကာ YMBA ဘာသာရေးအသင်းကြီးတွေ GCBA အသင်းကြီးတွေ ဒို့ဗမာအစည်းအရုံး အသင်းကြီး တွေ အမျိုးသမီး ကုမ္မာရီ အသင်းကြီးတွေ စသည့် လူထုအစည်းအရုံးအသင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ယနေ့ဘယ်လောက်တည်ထောင်ကြပြီးပြီလဲ။ ကိုယ့်လူထုအင်အား တိုင်းပြည်ထဲမှာ ဘယ်လောက်ရှိပါ သလဲ။? မိမိခိုင်းတာလေးကို အယောက်၂၀၊ ၃၀ လောက်လိုက်လုပ်တာလောက်နဲ့ ကျေနပ်ပြီး မြန်မာ့တော်လှန်ရေးကြီး အောင်မြင်မယ်လို့ထင်ပါသလား?
အဲဒီလောက်နဲ့ကျေနပ်နေရင် ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ပါ။တော်လှန်ရေးကြီးအောင်မြင်ရေးဟာ တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့ အရေးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် တတိုင်းပြည်လုံး လှည်း နေ လှေ အောင်း မြင်းစောင်းမကျန် ပါဝင်လာအောင် စည်းရုံးသိမ်းသွင်းပြီး နည်းလမ်းတွေပေးဖို့လိုပါတယ်။ယနေ့ပြည်တွင်းမှာနိုင်ငံရေးကို တော်တော်များများလုပ်ချင်နေကြသူတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ သူတို့ကိုနည်းပေးလမ်းပြမဲ့သူ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသူအဆင့်နဲ့သူ ကိုက်ညီအောင်ညွှန်ပြနိုင်မဲ့သူ ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရမဲ့သူ ဒါတွေကိုသူတို့မသိတာနဲ့ဘဲ သူတို့ဟာနိုင်ငံရေးနဲ့အလှမ်းဝေးနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိလူတွေကို ကျေးရွာ မြို့နယ် တိုင်း ပြည်နယ် အသီးသီးမှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်နိုင်ရပါမယ်။ မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းများကို ပုံသဏာန်မျိုးစုံနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားရပါမယ်။
ဥပမာ ဆေးလိပ်သောက်သုံးမှုလျှော့ချရေးအသင်း မူးယစ်ဆေးဝါးသောက်သုံးမှုလျော့ချရေးအသင်း သစ်ပင်စိုက်ပျိုးရေးအသင်း စသည်ဖြင့် အသင်းပေါင်းမြောက်များစွာ နေရာအနံ့အပြားမှာ တည်ထောင်ကြရပါမယ်။ပြီးတော့ စာပေ၀ိုင်းတွေ စာကြည့်တိုက်တွေ ဘာသာဘေဒသင်တန်းတွေကိုနေရာအနံ့အပြားမှာ ဖွင့်လှစ်တည်ထောင်ရပါမယ်။
ပြီးတော့ ခေတ်အဆက်ဆက်မှားယွင်းစွာတွေးခေါ်ခဲ့ကြသော ကံရှိလို့ခံရတာ သူကံနဲ့သူသွားလိမ့်မယ် တို့တော်လှန်စရာမလိုဘူး စသည်ဖြင့် မှားယွင်းသောအတွေးအခေါ်ဟောင်းများကို ပြောင်းလဲပေးဖို့လိုပါတယ်။ကံဆိုတာ အလုပ်ကို ခေါ်တာဖြစ်သည့်အတွက် အလုပ်ကောင်းရင်ကံကောင်းပါတယ်။အလုပ်မကောင်းရင် ကံမကောင်းပါဘူး။ကံကောင်းချင်ရင် အလုပ်ကောင်းဖို့ လိုပါတယ်။မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံး ချစ်ချစ်ခင်ခင်ဖြင့် စည်လုံးညီညာစွာ တတိုင်းပြည်လုံး နေရာအနံ့အပြားတွင် အဖွဲ့အစည်းများတည်ထောင်ကာ တက်ညီလက်ညီဖြင့် လှည်း နေ လှေ အောင်း မြင်းစောင်းမကျန် ၀ိုင်းဝန်းတွန်းလှန်သော အလုပ်ကြီးကို လုပ်ကြမည်ဆိုလျှင် ကောင်းသောအလုပ် ကမ္မ-ကံကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် န အ ဖ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများရဲမတရားနှိပ်စက်နေခြင်းကိုခံနေရသော မကောင်းကံများ ဧကန်မုချလွင့်ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
န အ ဖ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကို အောင်နိုင်ဖို့မှာ ထိုင်ပြီးဆုတောင်းနေရုံ ဗေဒင်တွေမေးပြီး ယတတြာချေနေရုံ ကုလသမဂ္ဂတွေ အမေရိကတွေကယ်မှာဘဲဆိုပြီးထိုင်စောင့်နေရုံဖြင့် တော်လှန်ရေကြီးမအောင်မြင်နိုင်ပါ။န အ ဖ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကိုအပြီးသတ်ခေမှေုန်းနိုင်ဖို့ တော်လှန်ရေးကြီးအဆုံးသတ်အောင်မြင်ဖို့မှာ-မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံး ရဟန်းသံဃာ ကျောင်းသား စစ်သား လယ်သမားအလုပ်သမားဝန်ထမ်းပြည်သူအားလုံးဝိုင်းဝန်းပေါင်းစုကာတွန်းလှန်ကြမည်ဆိုလျှင်ဧကန်မုချအောင်ပွဲဝင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်းကိုအသိပေးပြောကြားလိုပါသည်။
တာဝန်သိသူတာဝန်ရှိသည် တာဝန်ကိုသူတော်ကောင်း သူမြတ်လောင်း အာဇာနည်တွေသာသိကြသည်
Posted by Ashin dhamma at 7:55 PM0comments
ဒါရေး ဒါမှတ် ဒါကိုကျက်ရင်
မင်းဘ၀မြတ် အဆင့်တက်လိမ့်မည်လို့ ဇွတ်ရိုက်သင်
ဒို့တစ်တွေရဲ့ အတ္တမာန်မာနများကို ခ၀ါချ
Posted by Ashin dhamma at 8:08 AM0comments
အခမ်းအနားကိုဒေသစံတော်ချိန်နေ့လည်၂ ၀၀ နာရီတွင်အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီး
Posted by Ashin dhamma at 1:42 AM0comments
U Thant Tan Chin
Publish at Scribd or explore others: u thant tan chin
Posted by Ashin dhamma at 1:36 AM0comments
Posted by Ashin dhamma at 11:33 PM0comments
Posted by Ashin dhamma at 5:28 PM0comments
We the freedom loving peoples of Burma make this declaration to you on this momentous occasion. Your inauguration represents the triumph of the politics of hope against the politics of fear and division. Today our country is engaged inagreat struggle to free ourselves from tyranny and fear. In order to achieve the very principles of democratic values that we harbor in our hearts, the same values you so eloquently espoused in your victory speech with words that aroused our hopes and inspired us, we must persist in our struggle in this critical year 2009.
So many of our fellow country women and men, whose hearts and minds are dedicated to the ideals of democracy, are now languishing in remote prison labor camps far from their homes and loved ones, in atrocious conditions, enduring mental and physical torture and summary executions at the hands of the military. This then is the measure of what the military is willing to do at any given point, and at any cost, in order to stay in power. Thus, military rule has deprived the present of meaningfulness and hold out no hope for the future – so said our leading figure in this struggle, Aung San Suu Kyi, in 1990.
Presently, this military has embarked on maneuvering to transform itself intoapseudo-civil government that will secure its power in perpetuity. Hence, it has manipulated, and continues to manipulate, some of these breakaway ethnic groups who have compromised and succumbed to the military's corrupt ways of persuasion. However, these compromised and corrupted ethnic individuals do not in any way represent the ethnic people's real need nor their true aspirations to be freed from oppression, tyranny and unjust laws brutally imposed on them, the overwhelming majority within the nation. This goes against the grain of human nature enshrined in the Universal Declaration of Human Rights of 1948.
These machinations by the military all point to an intransigent junta bent on holding power for power's sake only. It is the worst form of tyranny and has become the tragedy ofanation that keeps the people in unending suffering and continuous turmoil, not of their own making.
We the freedom loving peoples therefore seek your help urgently to enact more effective measures and maintain strong sanctions that will force the military to come to the negotiating table and engage in meaningful dialogue with the democratic forces of the nation. The bogus and fraudulent 2010 election planned by the junta is designed to further enslave the peoples of Burma toacruel and callous regime. Hence, Mr. President, as the present leader of the world's leading democracy, we are hopefully confident that you will do all in your just power to help us emancipate our country fromamilitary planned system of dominance.
For these cogent reasons, with your help Mr. President, we will be able to reclaim our inalienable rights as members of the human family, living and protected with dignity by the rule of law. We understand that you haveagreat task ahead of you, but know that you are committed to the principles of freedom and democracy, and that you will help us in our struggle to free ourselves from oppression and tyranny. We wish you and your family well in the future.
2009 Collective Action Committee (CAC-BURMA), on behalf of all the freedom loving peoples of Burma.
Posted by Ashin dhamma at 8:30 PM0comments
ဒီတော့မှ ဒုက္ခတွေ့ကြ ဗိုလ်သုနခ
လိမ္မာ ခဲ့သမျှ အမူအရာတွေ
အစိမ်းရောင် အခြယ်ခံထားရတဲ့ ဗိုလ်သုနခ
အိုဘယ့် ဒုက္ခ အိုဒုက္ခ
Posted by Ashin dhamma at 6:04 AM0comments
ဆောင်ကိုထွန်းထွန်းကိုငွေတော်ကျီကုန်း ရပ်ကွက်၊ ရွှေထွန်းလမ်း၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်နေအိမ်တွင်စက်တင်ဘာလ၁၄ရက်နေ့လည်၁နာရီက၀င်ရောက်
Posted by Ashin dhamma at 1:47 AM0comments
Posted by Ashin dhamma at 12:30 AM0comments
ရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှု ခေါင်းဆောင် ဦးဂမ္ဘီရအစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြ
ရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှု သံဃာ့အာဇာနည် ခေါင်းဆောင် ဦးဂမ္ဘီရ
စက်တင်ဘာ သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင် သံဃာတော်တပါး ဖြစ်တဲ့ ဂမ္ဗီရဟာ မန္တလေး အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေပြီးတော့ ကျန်းမာရေး မကောင်းဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့တဲ့ သူ့မိသားစု ကိုလည်း အာဏာပိုင်တွေဘက်က ထောင်ဝင်စာ တွေ့ခွင့်မပေးတဲ့ အပြင် အခုဆိုရင် ပါဆယ်ကိုတော့ ပေးခွင့်မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အရှင်ဂမ္ဗီရ အနေနဲ့ မန္တလေးထောင်တွင်းမှာ ဘာကြောင့် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြနေတာလဲ။ ဘယ်နေ့ကစပြီး အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့တာလဲ ဆိုတာကို သိရအောင်လို့ အရှင်ဂမ္ဗီရ ရဲ့ အစ်မဖြစ်သူကို မေးကြည့်တော့ -
ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့တော့ အရှင်ဂမ္ဗီရ ရဲ့ မယ်တော်ပဲ သွားတွေ့တာလားရှင်။ -
ဒါကတော့ မန္တလေးအကျဉ်းထောင်တွင်းမှာ နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့ သံဃာလှုပ်ရှားမှု ခေါင်းဆောင် အရှင် ဂမ္ဗီရ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစ်မဖြစ်သူက ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Ashin dhamma at 12:23 AM0comments
ခရစ်နှစ်က 1945 ခုနှစ်
တကမ္ဘာလုံးက မော်ကွန်းထိုးလို့ မှတ်တမ်းတင်
ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်(လ်) ဆုရှင်
အသက် (၆၀) ပြည့်
ဒို့တတွေ ညီညွတ်ကြကာ လက်တွဲလျှောက်
တနေ့ ဒီမိုကရေစီ အမှန်ရမှာမို့
ဒေါ်စုရဲ့ အသက် (၆၀) ပြည့်မွေးနေ့မြတ်မှတည်
ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ တွေနား
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အသက် ၆၀ ပြည့်မွေးနေ့တွင်ပြည်တွင်းမှာရေးစပ်ဖြန့်ဝေခဲ့သောကဗျာဖြစ်သည်။
Posted by Ashin dhamma at 12:59 AM0comments
Posted by Ashin dhamma at 5:07 AM0comments
န အ ဖ စစ်ဘီလူးကြီးများအားတိုက်ထုတ်ပြစ်ကြလော့
Posted by Ashin dhamma at 5:06 AM0comments
မန္တလေးမှ နိုင်ငံရေးသမားလူငယ်များ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ချခံရ
အထိန်းသိမ်းမခံရမီ ရက်ပိုင်းအတွင်းကတွေ့ရသော မကေသီအောင်
မြန်မာအာဏာပိုင်တို့က မန္တလေးမှ နိုင်ငံရေးသမားလူငယ်အချို့ကို အောက်ပါအတိုင်း ကြီးလေးသော ထောင်ဒဏ်များ ပေးလိုက်သည်။
ကိုဗိုလ်မင်းယုကို (ခေါ်) ဖြိုးကြီး ၁၀၄ နှစ်
ကိုညီ ၅၀ နှစ်
ကိုဝေမျိုးထူး ၂၆ နှစ်
မကေသီအောင် ၂၆ နှစ်
ထောင် ၂၆ နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရသည့် မကေသီအောင်သည် အသက် ၂၃ နှစ်သာ ရှိသေးသည်ဟု ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုထွန်းထွန်းက ပြောပြသည်။ မကေသီအောင်သည် ကိုယ်ဝန်ရှိပြီး ၂ ပတ်အကြာတွင် ဖမ်းဆီးခံရခြင်းသောကြောင့် ယခုအခါ မကေသီအောင်တွင် ကိုယ်ဝန် ၆ လ ရှိနေသည်ဟု ဆိုသည်။
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီ စောင့်ရှောက်ရေး အသင်းက ယနေ့ သတင်း ထုတ်ပြန်ရာ အဆိုပါ လူငယ်များသည် မန္တလေးအကျဉ်းထောင်အတွင်းရှိ တရားရုံးတွင် စီရင်ချက် ချခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ တရားခွင်သို့ ရှေ့နေများ၊ မိသားစုဝင်များ သွားရောက်ခွင့် မရခဲ့ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါလူငယ်အများစုမှာ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် (အထက်ဗမာပြည်) ၏ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ပြီး၊ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကုန်ပိုင်းက ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ မြန်မာပြည်တွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော် ရှိသည်ဟု အတိုက်အခံများက ဆိုသည်။
တစ်ဘ၀ တစ်ခဏ ထာဝရမဖြစ်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်အစိုးရအလိုကျ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နေသော နိုင်ငံတော်သံဃာ့နာယကအဖွဲ့က ရဟန်း တော်များ နိုင်ငံရေးမလုပ်သင့်၊မလုပ်ရဟု ညွှန်ကြားလွှာများ ထုတ်ပြန်ထားလေသည်။ယင်းညွှန်ကြားလွှာ များကို ကြည့် ၍ အချို့သော ဒကာ ဒကာမ များကလည်း ရဟန်းတော်များ နိုင်ငံရေး မလုပ်သင့်တာ ဟုတ်များ ဟုတ်လေ မလားဟု ယုံမှား တွေဝေနေကြလေသည်။
၀ိဋဋူပ၏ စစ်တပ်ကြီး သာကီဝင် လူမျိုးများကိုသတ်ဖြတ်ရန် စစ်ချီသွားသောအခါ ဘုရားရှင် ကိုယ်တော် မြတ်ကြီးသည် သစ်ပင်ရိပ် အနည်းငယ်သာရှိသော နေရာသို့ ကြွ၍ သာကီဝင် လူမျိုးများကို သတ်ဖြတ် ဖျက်ဆီးခြင်း မပြုရန် မေတ္တာရပ်ခံလေသည်။
မြန်မာအစိုးရအလိုကျဆေင်ရွက်လုပ်ကိုင်နေသော သံဃနာယကအဖွဲ့က ရဟန်း တော်များအား ဂန္ထဓူရ ၊၀ိပဿနာ ဓူရ( စာပေအလုပ်၊တရားအလုပ်)နှစ်မျိုးသာဆောင်ရွက်ရမည်ဟု ညွှန်ကြားလွှာများ ထုတ်ပြန် ထားလေသည်။တကယ်တော့ သံဃာတော်များအား အစိုးရက ချုပ်ကိုင်လိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စစ်အာဏာရှင် အ လိုကျ ၎င်းညွှန်ကြားလွှာများကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်။ဤ ညွှန်ကြားလွှာများ ထုတ်ပြန် နေသောအလုပ်သည်ပင်ဂန္ထဓူရ ၊၀ိပဿနာဓူရ ၏ အပြင်ဘက်က အလုပ်များ ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့နိုင် ပေသည်။
မရိုးမသား စိတ်ထားဖြင့် ဂန္ထဓူရ၊၀ိပဿနာဓူရ ကိစ္စ မှလွဲ၍ အခြားကိစ္စ မလုပ်ရ ဟုတားမြစ်ခြင်းသည် ဘုရားရှင်၏ ဆန္ဒတော်နှင့် သံဃာတော်များ၏ အများအကျိုး ဆောက်ရွက်ခွင့်ကို တားမြစ်ခြင်း ဖြစ်လေသည်။တနည်းအားဖြင့် သာသနာတော်၏ ကောင်းမြတ်သော အစဉ်အလာနှင့် သာသနာတော်အပေါ် လူအများတို့ အားကိုးမျှော် လင့်မှုများကို ရိုက်ချိုး ဖျက်ဆီးခြင်းပင် ဖြစ်လေသည်။
မြန်မာ့ရာဇ၀င်ကိုပြန်ကြည့်လျှင် ပုဂံခေတ်၌ ရှင်ဒိသာပါမောက်သည် မြန်မာ့မြေ ပေါ်သို့ ကျူးကျော် သိမ်းပိုက် လာသော တရုတ် ဘုရင်နှင့် စစ်တပ်များကို ကျူးကျော်ခြင်း မှရပ်တန့်ပါရန် ကြွရောက် မေတ္တာရပ် ခံခဲ့သောကြောင့် တရုတ်စစ်သည်တော်များပြန် ဆုတ်ခွာသွားသောသည့်အတွက် မြန်မာပြည်သူများ ချမ်းသာရာ ရခဲ့ကြ လေသည်။
အထက်ပါမြန်မာရဟန်းတော်တို့၏ ပြည်သူတို့အရေးဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများကို ရှေး ခေတ် ကျောင်းသုံး စာအုပ်များ တွင်ပင် ပြဌာန်း ခဲ့ဘူးလေသည်။ကိုလိုနီခေတ်တွင် ဆရာတော်ဦးဥတ္တမနှင့် ဆရာတော် ဦးဝိစာရတို့၏ မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေး အတွက် စွမ်းစွမ်းတမန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ မှုများသည် မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းကြောင်း၌ မည်သို့မျှချန်ထား ၍ မရသော အခန်းကဏ္ဌများဖြစ်လေသည်။
ယနေ့မျိုးဆက်သစ်များသည်ပင် တွေ့မြင်နေရသောဦးဥတ္တမပန်းခြံ၊ဦးဥတ္တမလမ်း ဦးဝိစာရကျောက်တိုင်၊ ဦးဝိစာရလမ်း တို့သည် မြန်မာရဟန်းတော်တို့၏ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး တနည်းအားဖြင့် အများပြည်သူတို့၏ ချမ်းသာရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများကို လိမ် ညာလှည့်ဖျား မေ့ဖျောက်၍ မရနိုင်သော အမှတ် အသား များဖြစ်လေသည်။
ရဟန်းတော်များသည် လူတစ်စု တစ်ဖွဲ့ အာဏာရဖို့ အတွက် ဒကာ၊ဒကာမတို့၏ ကြည်ညိုမှုနှင့် ဘုရားရှင် သာသနာတော်ကို အသုံးချ၍ စည်းရုံးဟောပြောခြင်း၊မပြုလုပ် သင့်ပေ။တနည်းအားဖြင့် ပါတီနိုင်ငံရေးများတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုသင့်ပေ။သို့ သော် နိုင်ငံရေးဟုခေါ်သည်ဖြစ်စေ၊မခေါ်သည်ဖြစ်စေ အများ ပြည်သူတို့၏ ဆင်းရဲဒုက္ခမှ ကယ်တင်ရန်နှင့် ဘ၀လွတ်မြောက်ရေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက် သမိုင်းပေး တာဝန် အရ မလွဲမသွေ ဆောင်ရွက် သင့် ဆောင်ရွက်ထိုက်ပေသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာသံဃာအရေးအခင်းတွင် ရဟန်းငယ်များ၏ လမ်း လျှောက်မေတ္တာပို့ ဆန္ဒပြ ခြင်းသည် ဒကာ ဒကာမတို့၏ နိမ့်ကျဆင်းရဲမှုများ၊အထွေထွေ အကျပ်အတည်းများကို ပြေလည်စေ နိုင်ရန်အတွက် မိမိတို့တတ်စွမ်းနိုင်သည့်ဘက်က ဆောင်ရွက်ကြခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။တနည်းအားဖြင့် အများ ပြည်သူကို အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက် နေသော စစ်အာဏာရှင်တို့၏ ကုလားထိုင်ကို ကိုင်လှုပ်ခဲ့သော လုပ်ရပ်များ ဖြစ် ခဲ့ ပါ သည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်သံဃနာယကအဖွဲ့က ၎င်းတို့အစဉ်အဆက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ သောညွှန် ကြားလွှာများဖြင့် စစ်အာဏာပိုင်များကို မီးစိမ်းပြလိုက်သောအခါ ရဟန်း တော်တို့၏ သွေးမြေကျဖြစ်ရပ်များ ပေါ်ပေါက် ခဲ့ရလေသည်။တကယ်တော့ နိုင်ငံတော် သံဃနာယကအဖွဲ့သည် စစ်အာဏာပိုင်များ လှူဒါန်းသော ကျောင်းတိုက်မျာ၊ ကားများ ၊လျှပ်စစ်ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ၊ အခြားငွေကြေးနှင့်လှူဖွယ်ဝထ္ထုများကိုလက်ခံရရှိနေသော အဖွဲ့ ဖြစ်လေသည်။
နိုင်ငံတော်သံဃနာယကအဖွဲ့သည် စစ်အာဏာပိုင်တို့၏ ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတို့ အပေါ်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုများအတွက် တစုံတရာ မေတ္တာရပ်ခံ၊ တားမြစ်ဆုံးမ ကန့်ကွက်ခြင်း ၊ ကာကွယ်ပေးခြင်း မရှိခဲ့ပဲ စစ်အာဏာရှင်တို့ အလိုကျသာ ၎င်းတို့၏ ညွှန်ကြားလွှာများဖြင့် ရဟန်းငယ်များ၏ ပြည်သူတို့အရေး ဆောင့်ရွက်ချက်များကို တား မြစ် ကန့်ကွက်ခဲ့လေသည်။
ရဟန်းတော်များ နိုင်ငံရေး လုပ်သင့် မလုပ်သင့် ဟူသော အယူအဆနှင့် ပတ်သက်၍ ပီနန်ဆရာတော်ကြီး ဦးပညာဝံသကတော့ နိုင်ငံဆိုတာ အိမ်နှင့်တူကြောင်း နိုင်ငံတွင်းနေပြည်သူများသည် မိသားစုနှင့်တူကြောင်း အိမ်၏အရေးကိစ္စသည် မိသားစု အားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သကဲ့သို့ နိုင်ငံ၏ အရေးသည်လည်း နိုင်ငံသား အားလုံးနှင့် သက် ဆိုင်ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ မိန့်ကြားတော်မူပါသည်။
အထက်ပါတင်ပြချက်များကို အကျဉ်းချုပ်သုံးသပ်ကြည့်လျှင် ရဟန်းတော်များ အနေဖြင့် မိမိတို့၏ အာဏာ၊ ငွေကြေး၊ လာဘ်လာဘ ဟူသော အတ္တဟိတ အကျိုးစီးပွါးအတွက် လုံးဝမဆောင်ရွက်သင့် မဆောင်ရွက်ထိုက်ပဲ အများ ပြည်သူ ဒကာ ဒကာမတို့အနေဖြင့် လည်း ထိုကဲ့သို့သော လုပ်ရပ်များကိုလုံးဝ ကန့်ကွက် ရှုံ့ချ ထိုက် ပေသည်။ နိုင်ငံရေးဟု ဆိုသည်ဖြစ်စေ မဆိုသည်ဖြစ်စေ အများပြည်သူတို့၏ လွတ်မြောက် ရေးနှင့် ကောင်းကျိုး ချမ်းသာရေး ဟူသော ပရဟိတ အကျိုးစီးပွါးအတွက် ဆောင်ရွက်နေ သောရဟန်းတော်များကို မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့ အစည်း မဆို လုံးဝ မတားမြစ်သင့်ပဲ ထောက်ခံ အားပေး ကူညီဆောင့်ရွက်သင့် ကြောင်း တင်ပြ ရေးသား လိုက်ရပါသည်။
အမည်မဖော်လိုသူ တပ်တွင်းမှ အရာရှိတစ်ယောက်မှ ကြားထားရသော သတင်းဖြစ်ပါတယ်။
အခု ထောင်ဒဏ်နှစ်ကြီး ကျထားသော နိုင်ငံရေးသမားများနဲ့၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကို နအဖက ရဲဘက်ပို့ ပြီး၊ မတော်တဆ ထိခိုက်ပုံမျိုးနဲ့ သေကြောင်း ကြံစည်ဖို့ လုပ်နေပါတယ်။ အဲ့လိုနည်းနဲ့ တစ်ဦးချင်းစီကို အကုန်သတ်ပစ်ဖို့ ကြံစည်နေပါတယ်လို့တပ်အတွင်းမှ အရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားလာပါတယ်။
Posted by Ashin dhamma at 5:53 PM0comments
Posted by Ashin dhamma at 4:47 PM0comments
Posted by Ashin dhamma at 7:48 PM0comments
အသက်နဲ့ ရင်းရတဲ့ လွတ်လပ်ခြင်းဆိုတဲ့ရက်
ယုတ်မာသူလူတစုရဲ့ ၊ နှိပ်စက်ကာညှင်းပန်း။
တချိန်မှာ ဧကန်အောင်ရမယ်လို့ 
ဒီမိုကရေစီမဏ္ဍိုင်ကို အနိုင်ရအောင်တိုက်မယ်လို့ 
တို့ ပြည်သူတွေ နှလုံးသားမှာ
Posted by Ashin dhamma at 5:14 PM0comments
Posted by Ashin dhamma at 5:09 PM0comments
Posted by Ashin dhamma at 6:49 AM0comments
ဂမ်ဘာရီသည် နအဖ၏ ရုပ်သေး
ရုပ်သေးဆိုတာ မြန်မာပြည်ဖွား လူကြီးလူငယ် အားလုံးသိပြီးသားပါ။ အဲဒီ့ရုပ်သေးဟာ ခြေ၊ လက်၊ ခေါင်း
စတဲ့ ပြင်ပ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေ ရှိပေမယ့် အသက်မရှိ၊ ဦးနှောက်မရှိ၊ အသည်းနှလုံး မရှိ၊
သူများကြိုးဆွဲရာ “က” ရ၊ လှုပ်ရှားရ။ သူ့မှာ ခေါင်းရှိပေမယ့် ဦးနှောက်မပါ၊
ပါးစပ်ရှိပေမယ့် သူ့ဟာသူ မပြောနိုင်၊ မျက်စိရှိပေမယ့် သူ့ဟာသူ မကြည့်မမြင်နိုင်၊ လက်ရှိပေမယ့်
သူ့သဘောနဲ့သူ မရေးနိုင်၊ ခြေထောက် ရှိပေမယ့် သူ့သဘောနဲ့သူ မသွားနိုင်၊ ကိုယ်ခန္ဒာ ရှိပေမယ့်
အတွင်းမှာ အသည်းနှလုံးက အစ ဘာမှ မရှိ။
အလားတူ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီး ဆိုတဲ့ ဂမ်ဘာရီဟာလည်း နအဖရဲ့
ရုပ်သေးပါ။ သူဟာ နဂိုက လူဖြောင့်၊ လူတော်၊ လူကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ ဒါကြောင့်
ဘန်ကီမွန်းက သူ့လူယုံတော်အဖြစ် ခန့်ပြီး မြန်မာပြည်ကို လွှတ်လိုက်တာ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်ရောက်လို့
နအဖနဲ့ တွေ့ပြီးတာနဲ့ လူကောင်းက မူပြောင်းသွားတယ်။ ကိုယ်ကသူ့ကိုယ်၊ စိတ်က နအဖစိတ်ဖြစ်သွားပြီ။
နအဖ ကြိုးဆွဲသမျှ “က” နေရတဲ့ “ရုပ်သေးကြီး” ဖြစ်သွားတယ်။
ကုလသမဂ္ဂနဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီက ပေးလိုက်တဲ့ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်တာက နည်းနည်း၊ နအဖ
အကြိုက်လိုက်လုပ်နေတာက များများဖြစ်နေပါတယ်။ သူ့ကိုပေးလိုက်တဲ့ တာဝန်က မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား
ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး (သို့မဟုတ်) ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ ဖြစ်ပေမယ့် နအဖ
အာဏာပိုင်တွေနဲ့ တွေ့ပြီးတာနဲ့ လာရင်းရည်ရွယ်ချက်တွေ လွဲချော်ကုန်ပါတယ်။
သူဟာ နအဖရဲ့ “ရုပ်သေးကြီး” ဖြစ်သွားပုံကို သုံးသပ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်…
NLD ခေါင်းဆောငများဖြစ်ကြတဲ့ ဦးအောင်ရွှေ၊ ဦးလွင်၊ ဦးညွန့်ဝေ၊ ဦးသန်းထွန်း၊
ဦးစိုးမြင့်တို့နဲ့ စိမ်းလဲ့ကန်သာ ဧည့်ဂေဟာမှာ တွေ့ဆုံစဉ် ဂမ်ဘာရီက “ဒီတစ်ခေါက် ခရီးစဉ်မှာ
နိုင်ငံရေးကိစ္စ သက်သက်ကိုသာ ဆောင်ရွက်ဖို့လာတာ ဖြစ်ကြောင်း” ပြောပြီး လုပ်ငန်းစဉ်အချက် (၅) ချက်ကို
ပြောပြတယ်လို့ အဖွဲ့ချုပ်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဦးဥာဏ်ဝင်းက တဆင့် ပြောပြပါတယ်။
(၁) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးတင်ဦး အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအားလုံး လွတ်မြောက်ရေး
(၂) စစ်အစိုးရနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး
(၃) တိုင်းပြည်စီးပွားရေး အခြေအနေ ဆိုးရွားနေရာက တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရေး
(၄) မြန်မာပြည်တွင် ဂမ်ဘာရီကိုယ်စား ဆက်သွယ်ရေး အရာရှိတစ်ဦး ခန့်ထားရေး
(၅) နိုင်ငံရေး ပြဿနာ အဖြေရှာရာမှာ ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် ကိုယ်တိုင် မြန်မာပြည်ကို
အထက်က ချမှတ်ပေးလိုက်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် (၅) ချက်ဟာ “အမျိုးသား သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး”
အတွက် အလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့ အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြောရင်း၊ ဆွေးနွေးရင်းနဲ့က
နအဖစိတ်တွေ ၀င်သွားပါတယ်။ ၀င်သွားပုံက ဒီလိုပါ။
(၁) ဂမ်ဘာရီက သူ့လုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာ မပါတဲ့ “၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်မျှတအောင်
လုပ်ဖို့လိုတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့
ဆောင်ရွက်ဖို့ အခြေအနေစတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် (၅) ချက်ထဲမှာ မပါတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ပြောပါတယ်။
အဲဒီ့အခါ NLD လူကြီးများက “ဒီရွေးကောက်ပွဲကို ကုလသမဂ္ဂက လက်ခံထားပါသလား၊ ဒါဆိုရင် ၁၉၉၀
ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကိုရော ဘယ်လိုသဘောထားပါသလဲ” လို့ ပြန်မေးတော့ သူက ဘာမှ မဖြေနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ဘယ်ဖြေနိုင်ပါလိမ့်မလဲ။ သူ့ခေါင်းထဲမှာ နအဖ ဦးနှောက် ၀င်နေခဲ့ပြီလေ။ ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်
သူဟာ နအဖရဲ့ “ရုပ်သေး” ဖြစ်နေပြီ ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။
(၂) နအဖက မေလက ကျင်းပတဲ့ ဆန္ဒခံယူပွဲဟာ မတရား၊ မမျှတတဲ့ အတုအယောင် ဆန္ဒခံယူပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာ
အားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲရာမှာ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုထဲက တစ်ယောက်မှ မပါဘဲ
နအဖလူတွေနဲ့ တစ်ဖက်သတ် ရေးဆွဲသွားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန္ဒခံယူပွဲမှာလည်း အမိန့်၊ အာဏာ၊
အသပြာသုံးပြီး မဲထည့်ခိုင်းတာကလည်း နအဖလူပါပဲ။ မဲရုံစောင့်၊ မဲရေတွက်၊ မဲစာရင်းကြေညာတာကလည်း
နအဖလူတွေချည်းပါပဲ။ ဒီလိုမတရားနည်းတွေနဲ့ လုပ်နေမှတော့ ရွေးကောက်ပွဲကို မနိုင်ဘဲ နေပါတော့မလား။
လာမယ့် (၂၀၁၀) ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း ဒီမိုကရေစီ အုပ်စုထဲက ပါတီဆိုရင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်
မပြုဘူးလို့ ခုထဲက စည်းကမ်းနဲ့ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ နအဖက ခွင့်ပြုထားတဲ့ သူ့လက်ရုံးပါတီပဲ
၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတော့ သူတို့ပဲ အနိုင်ယူသွားမှာပဲလေ။ ကုလနဲ့ နိုင်ငံတကာက
စောင့်ကြည့်နေလည်း အပိုပါပဲ။ မျက်စိညောင်းရုံပဲ ရှိလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ “လွတ်လပ်မျှတအောင်”
ဆိုတဲ့စကားဟာ ဦးနှောက်မပါ၊ အသည်းနှလုံးမရှိတဲ့ ရုပ်သေးပြောတဲ့ စကား၊ ကြိုးကိုင်သူ နအဖ ပြောတဲ့
စကားသာ ဖြစ်နေပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဂမ်ဘာရီရဲ့
နအဖဟာ (၂၀၁၀) ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ နှစ်ပေါင်း (၂၀) လောက်ကတည်းက ပြည်သူတွေကို ဥပဒေမဲ့
မတရား အနိုင်ကျင့်၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်း သတ်ဖြတ်နေတာ သူအသိပါပဲ။ (၁၉၉၀) ရွေးကောက်ပွဲကို နိုင်တဲ့
NLD ပါတီကို ကတိအတိုင်း အာဏာမလွှဲပေးတာလည်း သူအသိပါ။ အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရာမှာ ဒီမိုကရေစီမကျ၊
တစ်ဖက်သတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်း သူအသိ။ ဒီလိုတလျှောက်လုံး မတရား၊ မမျှတအောင် လုပ်ထားတဲ့အပြင် ကတိမတည်၊ လိမ်ညာရက်စက်၊ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲတဲ့ နေရာမှာ သရဖူဆောင်းထားတဲ့ နအဖဟာ (၂၀၁၀)
ရွေးကောက်ပွဲကျမှ တရားမျှတအောင် လုပ်မယ်တဲ့လား။ သူတို့စကားကို ဘယ်လိုယုံရတော့မှာလဲ။
ရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့ နအဖရဲ့ ရုပ်သေးအစိုးရ တက်လာတဲ့အခါ ပြည်သူတွေ အခု ကြုံတွေ့ခံစားနေရတဲ့
အခက်အခဲတွေထက် ပိုမိုတဲ့ ဒုက္ခသုက္ခတွေ ကျရောက်ခံစားရမယ်ဆိုတာ သူသိလျက်နဲ့ ပြောတာဟာ ဂမ်ဘာရီမှာ
အသက်ရှိပေမယ့် အသည်းနှလုံး မရှိဘူးဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။
(၃) ဂမ်ဘာရီဟာ နအဖရဲ့ “ရုပ်သေး” ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ နောက်ထပ် သာဓကတစ်ခုကတော့ (၁၉၉၀)
ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရထားတဲ့ ပါတီခေါင်းဆောင်များ၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များနဲ့
မင်းကိုနိုင်အစရှိတဲ့ (၈၈) မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကို တွေ့သင့်တွေ့ထိုက်ပေးပေမယ့်
မတွေ့စေရဘဲ ဘယ်သူကမှ အသိအမှတ်မပြုထားတဲ့ ကိုအေးလွင်ခေါ် “လောက်အေးလွင်” ကို နအဖ
စီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်း တွေ့ဆုံစေခဲ့တယ်။ ဒါကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဂမ်ဘာရီဟာ နအဖကြိုးဆွဲရာ “က”
နေရတဲ့ “ရုပ်သေးကြီး” ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားနေပြန်ပါတယ်။
(စကားချပ်၊ ကိုအေးလွင်ကို “လောက်အေးလွင်”လို့ခေါ်ရခြင်းကတော့ လောက်ဆိုတာ မစင်ထဲမှာနေပြီး
မစင်ပဲစားပါတယ်။ ကိုအေးလွင်ဟာ (၈၈) ကျောင်းသား ဖြစ်ပါလျက်နဲ့ ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံရတဲ့ လက်နက်မဲ့
ကျောင်းသားပြည်သူတွေဖက်က မနာဘဲ နအဖကျွေးတဲ့ မစင်ကိုစားပြီး နအဖအလိုကျလုပ်နေသူ ဖြစ်လို့ သူ့ကို
(၄) ဂမ်ဘာရီဟာ နအဖရဲ့ “ရုပ်သေး” အဖြစ် အဆိုးဆုံး၊ အောက်တန်းအကျဆုံး၊ အယုတ်ညံ့ဆုံး အလုပ်တစ်ခုကို
နအဖနဲ့ ပူးပေါင်းကြံစည်ခဲ့ပုံကို ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သခင်ချန်ထွန်းက
ရှုတ်ချထားပါတယ်။ သခင်ချန်ထွန်း ပြောစကားအချို့ကို ကောက်နှုတ်တင်ပြရရင်-
“ဩဂုတ်လ ၂၀ နဲ့ ၂၂ ရက်နေ့တွေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အိမ်နောက်ဖက် အုတ်တံတိုင်းမှ
လက်ကိုင်အသံချဲ့စက်ဖြင့် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီက စာပေးလိုက်ကြောင်း အော်ဟစ်အကြောင်းကြားပြီး တုံ့ပြန်မှု
မရသည့်အခါ ခြံတံခါး အုတ်တံတိုင်းမှာ စာကပ်ထားခဲ့ကြောင်း။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ
အတွေ့မခံတာကျတော့ ဘာလို့ ဒါမျိုး မလုပ်သလဲ၊ အဖမ်းခံထားရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကို ဒီလိုလာလုပ်တယ်ဆိုတာ
အင်မတန်သိပ်နုပ်တဲ့ ကိစ္စပါ။ ညကျတော့ တီဗွီမှာလည်းပြ၊ ဓာတ်ပုံနဲ့လည်း သတင်းစာမှာ ဖော်ပြတယ်ဆိုတော့
ဒါက ကြိုတင်စီစဉ်ပြီး လုပ်တဲ့သဘောဆိုတာ သိပ်ပေါ်လွင်ထင်ရှားတာပေါ့” (ခေတ်ပြိုင်၊ ဩဂုတ်-၂၅-၂၀၀၈)
အထက်ပါ သခင်ချန်ထွန်းရဲ့ စကားကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဂမ်ဘာရီဟာ ဒီကိစ္စမှာ
လိမ်ညာကောက်ကျစ်စဉ်းလဲတဲ့ နအဖနဲ့ ပူးပေါင်းကြံစည်တယ်ဆိုတာ သိပ်ထင်ရှားပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော်သူခိုးလူဆိုးအဖြစ် အများက သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ နအဖအုပ်စုနဲ့ ပူးပေါင်းကြံစည်တော့
ဂမ်ဘာရီဟာလည်း နအဖသူခိုး လူဆိုးစာရင်းဝင်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဂမ်ဘာရီဟာ နာမည်ပျက်ခံရတာနဲ့ တန်အောင်
အကျိုးအမြတ်ရလို့ ဖြစ်မှာပါ။ ဒါကြောင့် မူလလုပ်ငန်းစဉ်အချက် (၅) ချက်က ကျော်လွန်ပြီး
ရာဇာလီအစ္စမေးတုန်းကလည်း ဒီလိုပါပဲ။ သူ မြန်မာပြည်ရောက်တော့ ဟိုဖက်တစ်မျိုးပြော၊
ဒီဖက်တစ်မျိုးပြောပြီး အချိန်ဆွဲ “စား” သွားတာပဲ။ သူသာ ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်တာဝန်က
နှုတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေဘာမှ မတိုးတက်တဲ့ အပြင် တစ်နေ့တစ်ခြား
ဂမ်ဘာရီလည်း မြန်မာပြည်ကို (၆) ကြိမ်ရောက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဘာမှ မထူးခြားခဲ့ပါဘူး။ နအဖနဲ့ NLD
ကြား ဘာတစ်ခုမှ တိုးတက်အောင် မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ နအဖဟာ ဒီနေ့ထိ တိုင်းသူပြည်သားတွေကို
ဂမ်ဘာရီဟာ ကိုယ်လက်အင်္ဂါပြည့်စုံပါလျက် ဦးနှောက်မပါ၊ အသည်းနှလုံးမရှိတဲ့ နအဖရဲ့ “ရုပ်သေးရုပ်”
တစ်ရုပ်ဖြစ်နေတာကြောင့် မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး တိုးတက်အောင်
ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တဦး ထောင်ဆေးရုံရောက်
စစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း ထားသော ဗကသ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သူ ကိုကျော်ကိုကို သည် အင်းစိန် ထောင်တွင်း၌ ကျန်းမာရေး ဆိုးဝါးနေသည့် အတွက် ထောင်ဆေးရုံတွင် ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူနေရကြောင်း ဖခင်ဖြစ်သူက ပြောသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် မတ်လအတွင်းက ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည့် အသက် ၂၇ နှစ်သည် အသည်းရောင် အသားဝါ ဝေဒနာခံစားနေရသောကြောင့် လွန်ခဲ့သည့် စနေနေ့က ထောင်ဆေးရုံသို့ တက်ရောက်ကုသခံနေရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ၎င်း၏ ဖခင် ဦးကျော်အေးကပြောပြသည်။
“မနေ့က ထောင်ဝင်စာသွားတွေ့တော့ အသည်းရောင်အသားဝါ ဖြစ်လို့ ထောင်ဆေးရုံတက်နေရတယ်တဲ့၊ ထောင်ဝန်ထမ်းကပြောတယ်၊ သူ့ကို သောကြာနေ့က ရုံးထုတ်တယ်၊ ရုံးထုတ်တာ နောက်ကျတယ်၊ အပြန်ကျ တော့ အန်တယ်တဲ့၊ ဆေးမှူးလည်း မရှိ၊ ဆရာဝန်လည်းမရှိတော့ဘူး၊ စနေနေ့ကျတော့ ထပ်ပြီးအန်တော့ ဆရာဝန် ခေါ်ပေးတယ်တဲ့၊ ဆရာဝန်က ဆေးရုံ တက်ခိုင်းတာ”ဟု ဦကျော်အေးက ပြောသည်။
ယင်း ကိုကျော်ကိုကိုသည် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် မဟာတန်း ကျောင်းသားတဦးဖြစ်သည်။၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးနောက် အာဏာပိုင်များ၏လိုက်လံဖမ်းဆီးမှုမှတိမ်းရှောင်နေရရာ ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ က ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး ၎င်းအား ဗီဒီယို အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၂ နှင့် တရားစွဲဆို ရုံးထုတ်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“သူက မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ပြန်လာတယ်၊ ၁၆ ရက်နေ့မှာ အဖမ်းခံရတာ၊ သူ့ဆီမှာ ဘာမှ ပါမလာဘူး၊ ဟန်းဖုန်း တလုံးပဲ ပါလာတယ်၊ သူဘယ်သွားလဲ ဆိုတာတော့ မသိဘူး၊ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာလှုပ်ရှားမှုမှာတော့ ပါခဲ့တယ်” ဟု ဦးကျော်အေးက ဆိုသည်။
လွန်ခဲ့သည့် လအတွင်းကလည်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ကိုဌေးလွင်ဦးနှင့် ကိုမောင်စန်း ဆိုသူ ၂ ဦးတို့သည် အကျဉ်းထောင်တွင်း ကျန်းမာရေး ဆိုးဝါးနေကြရာ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုမရရှိသည့်အတွက် သေဆုံးမှု ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။
မကြာသေးသော နှစ်များအတွင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၃၈ ဦးခန့် အကျဉ်းထောင်များအတွင်း သေဆုံးခဲ့ ကြောင်း နှင့် လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂၁၀၀ ကျော် အကျဉ်းကျခံနေရဆဲဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အသင်း၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရသည်။
Posted by Ashin dhamma at 6:04 PM0comments
သူတောင်းစား၊ အရူးကြီး၊ ၀န်ကြီး၊
ဒေါ်လာ သိန်းသန်း အဖိုးအနဂ္ဂလောက် တန်ရဲ့
ငါးပြားတန် ဦးဏှောက်ပြခန်း တဲ့
ဘယ်လိုပြခန်းလဲလို့ ထူးဆန်းလို့ ကျနော်ဝင်ကြည့်
ကျနော် ဖတ်ကြည့် မိတော့
ဟစ်တလာပင် သူတို့နှင့် မယှဉ်သာ
ကမ္ဘာ့ ယုတ်မာမှုပေါင်း သရဖူဆောင်း ဆိုပဲ
ဒီလိုနဲ့ ကျနော် လျှောက်ကြည့်
သူတို့ရဲ့ စာတန်းကိုပါ လှမ်းတွေ့မိတော့
သူတို့တွေရဲ့ အထ္ထုပ္ပတ္တိနဲ့ ဒီဂရီ
Cynic ၊ Egoist ၊ Egotist ၊ Pessimist ၊ Selfish ၊
Sadist ၊ Eccentric ၊ Argumentative ၊ Sycophant ၊
Prudent ၊ Obdurate ၊ Genocide တဲ့ ။
ပြီးတော့ သူတို့တွေရဲ့ ကွန်ယက်တွင်း
Nothing အပြတ်ရှင်းဆိုပဲ ။
ဒီလိုနဲ့ ၀င်ခဲ့မိတဲ့ ကျနော့်ခြေလှမ်း
ကျနော့ နားထဲ ညံသွားတာက…
မင်း …ကောင်းကောင်းသိစေရမယ်“ တဲ့။ ။
Posted by Ashin dhamma at 2:17 AM0comments
စစ်တွေကျောင်းသား ၅၀၀ ခန့် သွားလာရေးခက်ခဲလို့ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြ
ကမ္ဘာတ၀န်းမှာ ဓာတ်ဆီဈေးတွေ ကျဆင်းနေသလို မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာလည်း
အစိုးရကထုတ်ပေးတဲ့ ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းနဲ့ မှောင်ခိုလောကက ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းဟာ
သိပ်ပြီးမကွာတော့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျပ်တည်းနေတဲ့ စားဝတ်နေရေး
ပြဿနာကို ဖြေရှင်းတဲ့အနေနဲ့ အပိုဝင်ငွေ ရှာကြသူတွေအတွက် တွက်ခြေမကိုက်
ဖြစ်ကြရပါတယ်။ ဒီဂယက်ဟာ စစ်တွေက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေအတွက်
ပြေးဆွဲနေတဲ့ ကျောင်းအကြိုအပို့ ကားတွေအပေါ် ရိုက်ခတ်ခဲ့ပြီး အဲဒီကျောင်းကားတွေ
မထွက်တော့လို့ စစ်တွေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ၅၀၀ လောက် လမ်းလျှောက်
ကန့်ကွက်ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ထိုင်းအခြေစိုက် ဗွီအိုအေသတင်း
ထောက် မအေးအေးမာက ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးထားပါတယ်။
“အဲဒီကားသမားတွေကို ဓာတ်ဆီတဂါလံပေးတယ်။ ပြီးတော့ ကျောင်းသား တယောက်
“အခုက အစိုးရဈေးကလည်း တဂါလံကို ၃,၀၀၀၊ အပြင်မှာလည်း ၃,၀၀၀ ပဲဆိုတော့၊
ဈေး အတူတူဖြစ်နေလို့။ အစိုးရက ဈေးမလျှော့ဘူး၊ အပြင်မှာက ဈေးကျနေတယ်။”
“တစီးမှမရောက်လာတော့ ကျောင်းသားတွေက တဖြည်းဖြည်း များများလာတာပေါ့။
ဂိတ်ကကားတွေကို ခေါ်ပြီးတော့မှ ပို့ခိုင်းလိုက်တယ်။”
Posted by Ashin dhamma at 4:58 PM0comments
Posted by Ashin dhamma at 4:40 PM0comments
Posted by Ashin dhamma at 1:31 AM0comments
Posted by Ashin dhamma at 8:12 AM0comments
၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီလ(၄)ရက်နေ့ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ကြီး
မြောက်များစွာကျပြီး၊ရင်းပြီးမှရခဲ့ကြတာအားလုံးအသိဖြစ်ပါသည်။ထိုခေါင်းဆောင်ကြီး တွေသူတို့ ရဲ့ သမိုင်းပေးတာဝန်ကိုကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့ကြလို့သူတို့ ရဲ့ သမိုင်း မှတ်တမ်းကိုသူတစ်ပါးနိုင်ငံကျွန်စနစ်အောက်ကနေလွတ်မြောက်သောနေ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ လို့ ရဲရဲရင့်ရင့်စိုက်ထူနိုင်ခဲ့ကြသည်။သူတဲ့ရဲ့ သမိုင်းမှတ်တမ်းကမ္ဘာ့သ မိုင်းဝင်သွားခဲ့ပြီ။
ကိုယ့်အချင်းချင်းကျွန်ပြုထားသော စစ်အာဏာရှင်ကြီးများကား တိုင်းတစ်ပါးသားအင်္ဂလိပ်နှင့်ဖက်စစ်ဂျပန်တို့ ထက်ပင်ပိုမိုဆိုးဝါးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေတဖန်ပြန်လည်ကျဆုံးနေတဲ့ လွတ်လပ်ရေးကိုဘယ်လို
ရအောင်တိုက်ယူကြမှာလဲ?--စစ်အာဏာရှင်ဗိုလ်နေဝင်းလက်ထက်မှနေ၍ယနေ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ထိတိုက်ပွဲဝင်လာကြတာနှစ်ပေါင်း၄၇နှစ်ရှိပြီ။ယနေ့ ထိလွတ်လပ်ရေးမရကြသေး ပေ။
များစွာ သွေးမြေကျ ရင်းခဲ့ကြရသည်။ယခုထက်ထိစစ်အာဏာရှင်န.အ.ဖ ၏
အကျဉ်းထောင်များထဲတွင်ထောင်ဒဏ်(၁၀၄)နှစ်၊(၆၈)နှစ်၊(၅၈)နှစ်စသည် ဖြင့်နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေအကျခံမတရားနှိပ်စက်ခံနေကြရဆဲရှိသေး၏။ ဒါပေမဲ့လွတ်လပ်ရေးကားယနေ့ ထက်ထိမရရှိသေးသည်ကိုတတိုင်းပြည်လုံးအသိဖြစ်၏။ဒါကိုလျစ်လျူရှုမသိကျိုးကျွန်ပြုမနေကြပါနဲ့ ။
လက်ညီဖြင့်တော်လှန်ခဲ့ကြလို့ တိုင်းတပါးသူ့ ကျွန်အောက်ကနေလွတ်လပ်
ရေးကိုရအောင်ယူနိုင်ခဲ့ကြ၏။ဒါကိုယနေ့ (၆၁)နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ 
စစ်ကျွန်စနစ်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးကိုဘယ်လိုတိုက်ပြီးရ အောင်ယူကြမှာလဲ?ယနေ့ သမိုင်းပေးတာဝန်သည်မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး၏အ ပေါ်သို့ ကျရောက်နေပါပြီ။တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့ လွတ်မြောက်ရေးကို ငါနဲ့ မဆိုင်ဆိုပြီးဘေးထိုင်ဘိုင်ကျလက်မှိုင်ချနေမယ်ဆိုရင်သင်ဟာအဆင့် မြင့်လူသားတွေရဲ့ စွန့် ပယ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ်။သင်ဟာလူစင်စစ်ကနေနိမ့် ကျရွေ့ လျောသွားလိမ့်မယ်။လူမှာလူ့ တာဝန်ဝတ္တရားတွေရှိတယ်။ ဒီတာဝန်ဝတ္တရားတွေကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်နိုင်မှသင်ဟာလူပီသတဲ့ လူသားစင်စစ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဟန်းဖုန်းလေးခါးကြားချိတ်နိုင်ရုံ၊ကားကောင်းကောင်းစီးနိုင်ရုံ၊ပိုက်ဆံလေးသုံးနိုင်ဖြုန်းနိုင်ရုံ၊
န.အ.ဖတွေချပေးတဲ့ရာထူးပါဝါတွေကိုသာမက်မောပြီးငါဟာချမ်းသာစီးစိမ်တွေကိုခံစားနိုင်ပြီ၊လူပီသပြီလို့ လက်မထောင်နေရင်သင့်ကိုကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးဘီလ်ဂိတ်အိမ်က ခွေးကရယ်ပြနေလိမ့်မယ်။ သင်တို့ ခံစားနေတဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာတွေဟာ ဘီလ်ဂိတ်အိမ်က ခွေးတစ်ကောင်လောက်တောင်မှအဆင့်အတန်းမရှိဘူး။သင်တို့ ခံစားနေတာတွေဟာ ဘာမှလွတ်
ဖားနေရတဲ့အကောင်ကြီးကြီးအမှီးရှည်ရှည်ပြုတ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒိငဖားကောင်လဲ စည်းစိမ်အကုန်ပြုတ်ပြီးဒုက္ခရောက်တော့တာပဲ။ပြန်စဉ်းစားကြည့်။ဘီလ်ဂိတ်ရဲ့ ခွေးမှာ ခွေးအခွင့်ရေးအပြည့်အဝရှိတယ်။သူ့ ကိုဘယ်သူမှအလကားမငေါက်ရဲ
ဘူး။မရိုက်ရဲဘူး။သူ့ မှာဘယ်သူ့ ကိုမှမဖားရဘူး။သူ့ မှာလွတ်လပ်ခွင့်တွေအ
များကြီးရှိတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒိခွေးရဲ့ စီည်းစိမ်နဲ့ မိမိစည်းစိမ်ယှဉ်ကြည့်အဲ့ဒိခွေးကသာတယ်။ဒါကြောင့်စည်းစိမ်ခံစားရရုံမျှကို
လူပီသပြီလို့ တွေးကြရင်ဘီလ် ဂိတ်အိမ်ကခွေးကိုပြေးပြီးသတိရဖို့ လိုတယ်။ဒါပေမဲ့ ဘီလ်ဂိတ်အိမ်ခွေးစီးစိမ်ခံစားတက်ပေမဲ့ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးတို့ အမျိုးသားရေးတာဝန်တို့ ဆိုတာကိုဘယ်သိမလဲ။ဒီတာဝန်ကိုလူပီသတဲ့အ ဆင့်မြင့်အာဇာနည်တွေသာသိ
လူနဲ့ တိရ စ္ဆာန်ကွာတာ ခြားနားတာဟာ ဒါပါပဲ။
ဟာဘယ်အုပ်စုထဲမှာပါနေလဲ?လူ့ တိရ စ္ဆာန်အုပ်စုထဲမှာလား?လူပီသတဲ့လူ
ဆိုရုံလေးနဲ့ စားမြုန့် ပြန်ပြီးကျေနပ်မနေပါနဲ့ ။မိမိသွားရမှာကစစ်ကျွန်စနစ်မှအပြီးတိုင်လွတ်မြောက်ရေးဆီသွားရမယ်။လွတ်မြောက်ပြီးရင်ဒီလွတ်လပ်ရေး
အောင် မပျောက်ပျက်ရအောင် ခိုင်ခိုင်မာမာအခြေချတည်ဆောက်ရမယ်။ခိုင်
ခိုင်မာမာအခြေမချနိုင်ခဲ့လို့ အသက်သွေးချွေးတွေနဲ့ ရင်းခဲ့ရတဲ့ လွတ်လပ်ရေး
ကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ဒါကိုသင်္ခန်းစာယူရမယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောခဲ့သလိုပန်းမ၀င်ခင်တက်မထောင်ချင်ကြပါနဲ့ ။ဒါဟာသခင်စိတ်ဓာတ်မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်စိတ်ဓာတ်သာဖြစ်တယ်။တတိုင်းပြည်လုံးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ လက်ထက်ကလိုသခင်စိတ်ဓာတ်များမွေးရ်ျစစ်ကျွန်စနစ်အောက်ကလွတ်မြောက် အောင်တက်ညီလက်ညီဖြင့်တိုက်ကြမည်ဆိုလျှင်ဧကန်မုချလွတ်လပ်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မည်သူ့ ကိုမှအားကိုးမနေကြပါနဲ့ ။အတ္တာဟိ အတ္တနော နာထော -မိမိသည်
သာမိမိ၏အားကိုးရာဖြစ်၏ဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့ လမ်းစဉ်အတိုင်းကိုယ့်အားကိုယ် ကိုး၍ကြိုးစားကြပါ။ ယနေ့ ပြည်သူအင်အားသန်း(၅၀)ကျော်ရှိပါ၏။ထိုသန်း(၅၀)ကျော်သာညီ ညွတ်ကြမယ်ဆိုရင်တကယ့်မိမိနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးသည်မဝေးတော့ပါ။မိမိရဲ့ လက်တစ်ကမ်းအလိုတွင်သာရှိပါသည်။အားလုံးမိမိရဲ့ကျွန်စိတ်ကြောက် စိတ်များကိုဖျောက်ကြပါလော့။စည်းဝေးတိုင်ပင်ကြပါလော့။သခင်အသင်း များနေရာအနှံ့ ပြန်လည်ဖွဲ့ စည်းကာတွန်းလှန်ကြပါလော့။တကယ်လွတ် မြောက်ရမည်ဟူသောယုံကြည်စိတ်ဖြင့်တတိုင်းပြည်လုံးကြိုးစားတွန်းလှန်ကြပါလျှင်န.အ.ဖစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ
Posted by Ashin dhamma at 8:02 PM0comments